Tennessee ပြည်နယ် WIC | JPMA, Inc
Tennessee WIC အစီအစဉ်နှင့်သင်နှင့်သင်၏မိသားစုအားကျွန်ုပ်တို့ကြိုဆိုပါသည်။ သင့်တွင်မေးခွန်းများရှိပါက ကျေးဇူးပြု၍ သင်၏ဒေသခံ WIC ဆေးခန်းကိုဆက်သွယ်ပါ။ သင်၏ဒေသဆိုင်ရာ WIC ဆေးခန်းကို အသုံးပြု၍ ရှာဖွေပါ။တစ်ဦး WIC ဆေးခန်းကိုရှာပါအောက်ကရွေးချယ်စရာ
သင့်တွင်မေးခွန်းများရှိပါသလား WICShopper အက်ပလီကေးရှင်းလား။ JPMA ကိုအီးမေးလ်ပို့ပါ WICShopper@jpma.com
TNWIC ကဒ်ပြားကို ၉၅ ခုလုံးတွင်ရနိုင်သည်။
Tennessee WIC အစီအစဉ်သည်စက္ကူဖြင့်ထုတ်သည့်အကျိုးခံစားခွင့်ထုတ်ပေးသည့်စနစ်မှအီလက်ထရောနစ်အကျိုးခံစားခွင့်လွှဲပြောင်းခြင်းစနစ် (EBT) သို့ပြောင်းလဲခဲ့သည်။ စက္ကူအစားအစာတူရိယာ (ဘောက်ချာ) များထုတ်ပေးမည့်အစား WIC အစားအစာသက်သာခွင့်များကိုအီလက်ထရောနစ်အကျိုးခံစားခွင့်အကောင့်သို့ထုတ်ပေးသည်။
မိသားစုများအနေဖြင့်၎င်းတို့၏ WW ခွင့်ပြုထားသောကုန်စုံဆိုင်များရှိ WIC ခွင့်ပြုထားသောအစားအစာများကိုဝယ်ယူရန်နှင့်ဆေးဆိုင်များကို ၀ ယ်ရန်မိသားစုများသည်၎င်းတို့၏ TNWIC ကဒ်နှင့် PIN ကိုအသုံးပြုကြသည်။
ငါသည်ငါ့ WIC အစားအစာများအပေါငျးတို့သရရှိရန်ရှိပါသလား?
A: စျေး ၀ ယ်နေစဉ်အတွင်း WIC အစားအစာများကို ၀ ယ်ရန်မလိုအပ်ပါ။ သင်၏အကျိုးခံစားခွင့်လတစ်လျှောက်လုံးသင်အကြိမ်ကြိမ်ဝယ်ယူမှုပြုလုပ်နိုင်သည်။ သင်၏သက်သာခွင့်များကိုမည်သည့်အချိန်တွင်စတင်မည်၊ အဆုံးသတ်မည်ကိုမသေချာလျှင်သင်၏ WIC ဆေးခန်းသို့ဆက်သွယ်ပါ။
A: အချို့သောအစားအစာများအတွက်အစားထိုးအနည်းငယ်ခွင့်ပြုထားသည်။ သင်၏ရွေးချယ်မှုများကိုဆွေးနွေးရန်နှင့်သင်၏အစားအစာအကျိုးကျေးဇူးများကိုပြောင်းလဲရန်သင်၏ WIC ဆေးခန်းနှင့်ဆက်သွယ်ပါ။ စတိုးဆိုင်တွင်မည်သည့်နေရာတွင်အစားထိုးခြင်းမပြုရ။
A: WIC ဆေးခန်းကိုဆက်သွယ်ပါ။ သင်တစ် ဦး အာဟာရပညာရှင်နှင့်တွေ့ဆုံရန်နှင့်သင်ရရှိနိုင်သည့်ရွေးချယ်စရာများကိုဆွေးနွေးပါလိမ့်မယ်။
Q: အကယ်၍ အသုံးမပြုပါကကျွန်ုပ်၏ခံစားခွင့်များကိုနောက်လသို့ပြောင်းလိမ့်မည်လား။
ဖြေ။ ။ အဲဒီလထဲမှာ ၀ ယ်မဝယ်သေးတဲ့ WIC အစားအစာသက်သာခွင့်တွေကနောက်လမှာယူသွားမှာမဟုတ်ဘူး။
Q: WIC ပါ ၀ င်သူအားလုံး WICHOPPER အက်ပ်တွင်သူတို့၏ WIC ချိန်းဆိုမှုများအကြောင်းကြားစာကိုရရှိနိုင်မလား
A: မရှိပါ၊ သင်၏ WIC ဆေးခန်းသို့သင်၏ချိန်းဆိုချက်သည်သင်၏ WICSHOPPER အက်ပ်တွင်ပြသမည်ကိုမေးပါ။
မေး။ ။ ဓာတ်ပုံတွေဟာစင်ပေါ်မှာထုတ်ကုန်တွေကိုမှန်ကန်စွာကိုယ်စားပြုပါသလား။
A: မဟုတ်ပါ၊ အစားအစာထုတ်ကုန်ပုံများသည်တူညီသောဥပမာများဖြစ်ပြီးစတိုးဆိုင်၏တူညီသောထုတ်ကုန်မဟုတ်ပါ။
Q: ယနေ့ WIC ကဒ်အသစ်နှင့်ခံစားခွင့်များကိုကျွန်ုပ်ရရှိခဲ့သည်။ ကျွန်ုပ်ကို WICShopper အက်ပ်တွင်မည်သည့်အချိန်တွင်မှတ်ပုံတင်နိုင်မည်နည်း။
A: WICShopper အက်ပလီကေးရှင်းကိုသက်သာခွင့်များပေးပြီးသည်နှင့်သင်၏ကဒ်သည် ၂၄ နာရီခန့်ကြာနိုင်သည်။
Q: ကျွန်ုပ်တွင် TN WIC ကဒ်ရှိသော်လည်း WIC ခံစားခွင့်မရှိပါ။ WICShopper အက်ပ်တွင်ကျွန်ုပ်၏ကဒ်ကိုမည်သည့်အချိန်တွင်မှတ်ပုံတင်ရမည်နည်း။
A: သင်၏ WIC အကျိုးခံစားခွင့်များရှိရမည်။ ကဒ်ကို WICShopper အက်ပ်တွင်မှတ်ပုံတင်ရမည်။ WIC သက်သာခွင့်များကိုလက်ခံရရှိရန်အတွက်သင်၏ WIC ဆေးခန်းကို ကျေးဇူးပြု၍ ဆက်သွယ်ပါ။
Q: ဒီနေ့ကုန်စုံဆိုင်မှာကျွန်ုပ် WIC ကဒ်ကိုသုံးသည်။ အဘယ်ကြောင့်ကျွန်ုပ်၏အကျိုးခံစားခွင့်လက်ကျန်ငွေသည် WICShopper အက်ပ်တွင်မွမ်းမံထားသနည်း။
A: WICShopper အက်ပ်တွင်ကြည့်ရှုရန်သင်၏လက်ရှိလက်ကျန်ငွေသည် ၄၈ နာရီအထိကြာနိုင်သည်။
Q: WICShopper အက်ပ်တွင်ကဒ်တစ်ခုထက်ပိုပြီးထည့်နိုင်ပါသလား။
A: အကယ်၍ သင့်တွင်နောက်ထပ် WIC ကဒ်ပြားရှိပါက၎င်းကိုသင်၏ WICSHOPPER အက်ပ်ထဲသို့ထည့်နိုင်သည်။
ဖြေ - ဟုတ်တယ်။ Settings> အောက်သို့ Scroll သို့သွားပါ၊ သင်၏ဘာသာစကားကို> Benefit Expiration Notifications> Save Settings ကိုရွေးချယ်ပါ
ဖြေ - ဟုတ်တယ်။ ချိန်ညှိချက်များသို့သွားပါ၊ သင်၏ဘာသာစကားကိုရွေးချယ်ပါ> ချိန်းဆိုချက်အသိပေးချက်များ> ချိန်ညှိချက်များကိုသိမ်းပါ
Q: WICShopper App အတွက်ဘာသာစကားပြောင်းလို့ရမလား။
ဖြေ - ဟုတ်တယ်။ မူလစာမျက်နှာ> မီနူး> ချိန်ညှိချက်များ> သင်၏ဘာသာစကားကိုရွေးချယ်> ချိန်ညှိချက်များကိုရွေးပါ
Q: ကျွန်ုပ်မေးခွန်းများမေးခြင်း (သို့) ကျွန်ုပ်၏ WICSHOPPER အတွေ့အကြုံအပေါ်ပြန်လည်တုံ့ပြန်ခြင်းကိုဘယ်လိုရမလဲ။
A: မူလစာမျက်နှာ> အကူအညီရယူရန်သို့မဟုတ်အိမ်သို့သွားပါ> ပြန်လည်သုံးသပ်ပါ
W: Wichealth.org သို့ WICSHOPPER အက်ပ်မှတဆင့်ဝင်လို့ရပါသလား။
A: ဟုတ်ကဲ့၊ သင် wichealth.org ကို Dashboard မှဝင်ရောက်ကြည့်ရှုနိုင်သည်။ သင် wichealth.org သို့ ၀ င်ပါက WICSHOPPER အက်ပ်ကိုသင်စွန့်ခွာသွားလိမ့်မည်။
A: Home> WIC ခွင့်ပြုထားသောအစားအစာများ
Q: WIC မှခွင့်ပြုထားသောစတိုးဆိုင်များကိုကျွန်ုပ်၏inရိယာတွင်မည်သို့ရှာရမည်နည်း။
A: Home> WIC Stores
A: Home> WIC ဆေးခန်းရှာပါ
Q: TN TN WIC ကတ်ကိုလွန်ခဲ့သည့်ရက်သတ္တပတ်များကကျွန်ုပ်ရခဲ့သော်လည်းကျွန်ုပ်သည်ချိန်းဆိုချက်ပြီးဆုံးသွားပြီး၊ ကျွန်ုပ်၏ခံစားခွင့်များကို App တွင်မည်သည့်အချိန်တွင်တွေ့မြင်နိုင်မည်နည်း။
WICShopper အက်ပလီကေးရှင်းသည်သင်မှတ်ပုံတင်တွင်မည်သည့်ပြhaveနာများရှိမည်မဟုတ်ကြောင်းသေချာစေရန်သင်၏ WIC သက်သာခွင့်များကိုခြေရာခံရန်နှင့်ထုတ်ကုန်များအားသင်၏ကျန်ရှိနေသေးသောအကျိုးခံစားခွင့်များအားစစ်ဆေးရန်ခွင့်ပြုလိမ့်မည်။ သင်၏ TNWIC ကဒ်ကိုသင်မသွင်းရသေးလျှင်စတင်ရန် 'ကျွန်ုပ်၏ခံစားခွင့်' ခလုတ်ကိုနှိပ်ပါ။
အရေးကြီးမှတ်စု - သင်မြင်သောအကျိုးခံစားခွင့်များကို ၄၈ နာရီအထိနှောင့်နှေးစေသည်။ အကျိုးကျေးဇူးများကို WICShopper သို့တင်သောအခါမည်သည့်အချိန်တွင်ကြည့်မည်ကိုကြည့်ရန်သင်၏သက်သာခွင့်မျက်နှာပြင်၏ထိပ်ကိုစစ်ဆေးပါ။ ထိုအချိန်ကတည်းကစျေးဝယ်ထွက်ခြင်းသည်သင်၏အကျိုးခံစားခွင့်ချိန်ခွင်၌ထင်ဟပ်မည်မဟုတ်ကြောင်းသတိရပါ။
သင်၏ကဒ်ကိုမှတ်ပုံတင်ပြီးပါက“ ကျွန်ုပ်၏ခံစားခွင့်များ” ခလုတ်ကိုနှိပ်ခြင်းအားဖြင့်သင်၏ကျန်ရှိသောအကျိုးခံစားခွင့်များကိုကြည့်ရှုနိုင်မည်။ ထုတ်ကုန်များကိုစစ်ဆေးသောအခါကုန်ပစ္စည်းသည် WIC အရည်အချင်းပြည့်မှီမှုရှိ၊ မရှိနှင့်ကုန်ပစ္စည်းကို ၀ ယ်ယူရန်အတွက်အကျိုးကျေးဇူးများရှိမရှိကိုအက်ပ်ကသင့်အားပြောပြလိမ့်မည်။ ပထမ ဦး စွာ၊ ပင်မမျက်နှာပြင်၏ညာဘက်ထောင့်ရှိ“ ကျွန်ုပ်၏ခံစားခွင့်များ” ခလုတ်ကိုနှိပ်ပါ။
ဤဖန်သားပြင်မှသင် ၀ ယ်ယူနိုင်သောကုန်ပစ္စည်းများကိုကြည့်ရှုရန်၊ ရှာဖွေရန်၊ ဤအမျိုးအစားရှိကုန်ပစ္စည်းများအတွက်ချက်ပြုတ်နည်းများကိုကြည့်ရှုရန်သို့မဟုတ်ထိုအမျိုးအစားတွင်သင်ဝယ်ယူမှုကိုတိုးမြှင့်စေရန်ကူညီရန်ဂဏန်းတွက်စက်များကိုအသုံးပြုရန်သင်၏အကျိုးခံစားခွင့်များထဲမှအမျိုးအစားကိုနှိပ်နိုင်သည်။
တစ်ဦး WIC ဆေးခန်းကိုရှာပါ
ယင်းကိုသုံးပါ "တစ်ဦး WIC ဆေးခန်းကိုရှာပါWICShopper အက်ပလီကေးရှင်းရှိ“ ခလုတ်။ သင်၏ဆေးခန်းသို့လမ်းညွှန်များကိုထို app မှတိုက်ရိုက်ခေါ်ယူနိုင်သည်။
ယင်းကိုသုံးပါ "WIC StoresWICShopper အက်ပလီကေးရှင်းရှိ“ ခလုတ်။
သင်၏ WIC ဒေသခံဆေးခန်းမှပေးသောစျေးဝယ်စာရင်းကိုကြည့်ပါ ဒီမှာ) နှင့် WICShopper ရှိ 'My Benefits' ခလုတ်ကို သုံး၍ သင်၏ကျန်ရှိသောအကျိုးခံစားခွင့်များကိုကြည့်ရှုပါ။
အကျိုးခံစားခွင့်ဟန်ချက်သည် eWIC ကဒ်တွင်ရှိသည့်အိမ်ထောင်စုများ၏အစားအစာအကျိုးခံစားခွင့်အားလုံးကိုခွဲခြားသတ်မှတ်လိမ့်မည်။
တံဆိပ်ခတ်ခြင်းကိုသတ်မှတ်ထားသော WIC လက်လီအရောင်းဆိုင်များတွင်သာ ၀ ယ်ပါ။
ပစ္စည်းများကိုမဖတ်မီသင်ကသင်က eWIC ကဒ်ပြားကိုအသုံးပြုနေသည့်ငွေကိုင်ကိုပြောပြပါ။
ငွေကိုင်ကသင်၏ eWIC ကဒ်ကိုထည့်ရန်၊ သင်၏ဂဏန်းလေးလုံးပါသော PIN နံပါတ်ကိုထည့်ရန်နှင့်ခလုတ်ပေါ်ရှိ Enter ခလုတ်ကိုနှိပ်ပါ။
* မမှန်ကန်တဲ့ကြိုးစားမှု ၄ ခုသာခွင့်ပြုထားသည်။ ပါ ၀ င်သူသည် system သို့အလိုအလျောက်ပြန်လည်စတင်ရန်အတွက်အရောင်းအဝယ်တစ်ခုကြိုးစားရန်နောက်နေ့အထိစောင့်ဆိုင်းနိုင်သည် (သို့) Conduent ၏ဖောက်သည်ဝန်ဆောင်မှုဌာနသို့ဆက်သွယ်နိုင်သည်။ (844) 545-8405 သူတို့ကသူတို့ငွေပေးငွေယူပြီးစီးနိုင်ရန်အတွက်ချက်ချင်းအကူအညီလိုလျှင်။
WIC မှအတည်ပြုထားသောအစားအစာများကို eWIC ကဒ်မှနှုတ်ယူလိမ့်မည်။
သင်သည် WIC မဟုတ်သောပစ္စည်းများကို ၀ ယ်ပါကထိုပစ္စည်းအတွက်သင်မည်ကဲ့သို့ငွေပေးချေရမည်ကိုငွေကိုင်ကသင့်အားမေးမြန်းလိမ့်မည်။
WIC အရောင်းအဝယ်ပြီးဆုံးသွားသောအခါသင့်ကိုလျှောချရန်အချက်ပြလိမ့်မည် သင်၏ကဒ်နှင့်အသံသို့မဟုတ်မြည်သံပေါ်လာလိမ့်မည်။
စတိုးဆိုင်မှထွက်သွားသည့်အခါသင့်တွင် eWIC ကဒ်နှင့်ငွေလက်ခံဖြတ်ပိုင်းများရှိပါစေ။
Q: ငါအစားအစာအချို့ကို scan ဖတ်ခြင်းသို့မဟုတ် UPC နံပါတ်ကိုရိုက်ထည့်လိုက်သည်နှင့်ကွဲပြားသောမက်ဆေ့ခ်ျများတွေ့ရသည်။ သူတို့ဘာကိုဆိုလိုတာလဲ
A: စာများမှာ -
Allowed - ဤပစ္စည်းသည် WIC အရည်အချင်းပြည့်မှီပါသည်။ သိထားသင့်သည့်အချက်တစ်ခုမှာသင်သည်ပစ္စည်းတစ်ခုခွင့်ပြုသည်ကိုသင်မြင်ကောင်းမြင်လိမ့်မည်။ သို့သော်၎င်းသည်သင်၏ WIC အစားအစာအကျိုးခံစားခွင့်၏အစိတ်အပိုင်းမဟုတ်ပါ၊ ထို့ကြောင့်၎င်းကို WIC နှင့်မဝယ်နိုင်ပါ။ ဥပမာအားဖြင့်မိခင်နို့တိုက်ကျွေးသောမိခင်သည်ငါးများကိုစည်သွတ်သည်။ အကယ်၍ အပြည့်အ ၀ နို့တိုက်နေသောမိန်းမသည်သင်၏မိသားစုတွင်မရှိပါကငါးဖမ်းငါးများသည်သင်၏ WIC အစားအစာအကျိုးကျေးဇူး၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုမဟုတ်ပါ၊ သင်မှတ်ပုံတင်တွင်စည်သွတ်ငါးများကိုမဝယ်နိုင်ပါ။
အကျိုးကျေးဇူးများမလုံလောက်ပါ - သင့်အားဤအကျိုးခံစားခွင့်များကိုသတ်မှတ်ထားသည်၊ သို့သော်သင်စကင်ဖတ်စစ်ဆေးသောထုတ်ကုန်ကိုဝယ်ယူရန်ဤအမျိုးအစားတွင်ကျန်ရှိရန်လုံလောက်မှုမရှိပါ။
ရရှိနိုင်သောအကျိုးကျေးဇူးများမရှိပါ - ဆိုလိုသည်မှာသင်သည် WIC အရည်အချင်းပြည့်မှီသောထုတ်ကုန်ကိုစကင်ဖတ်စစ်ဆေးသည်၊ သို့သော်၎င်းသည်သင်၏ WIC အစားအစာအကျိုးခံစားခွင့်၏အစိတ်အပိုင်းမဟုတ်သောကြောင့်၎င်းကို WIC နှင့်မဝယ်နိုင်ပါ။ ဥပမာအားဖြင့်၊ တစ်နှစ်သားလေးသည်နို့လုံးကိုရရှိသည်။ သင့်မိသားစုတွင်တစ်နှစ်အရွယ်ကလေးမရှိပါကနို့တစ်လုံးလုံးသည်သင်၏ WIC အစားအစာအကျိုးခံစားခွင့်များထဲမှတစ်ခုမဟုတ်ပါ၊ သင်မှတ်ပုံတင်တွင်နို့တစ်လုံးလုံးမဝယ်နိုင်ပါ။
မ WIC ကို item - ဆိုလိုသည်မှာ WIC သည်ဤအရာကိုအတည်မပြုနိုင်ပါ။ အကယ်၍ သင်သည်ဤအစားအစာကို WIC အစားအစာသက်သာခွင့်များဖြင့် ၀ ယ်ယူသင့်သည်ဟုသင်ထင်မြင်ပါက“ငါသည်ဤမဝယ်နိုင်!ဒီ app ထဲမှာ "ခလုတ်ကို။
Q: လတ်ဆတ်တဲ့သစ်သီးနဲ့ဟင်းသီးဟင်းရွက်တွေကိုစကင်ဖတ်ကြည့်တယ်။ သူတို့ဟာစကင်ဖတ်စစ်ဆေးမှုမလုပ်ရင် (သို့) ခွင့်ပြုချက်မရဘဲတက်လာတတ်တယ်။ အဘယ်ကြောင့်?
A: လတ်ဆတ်သောသစ်သီးများနှင့်ဟင်းသီးဟင်းရွက်များပေါ်တွင်ဘားကုဒ်အချို့ကိုစကင်ဖတ်စစ်ဆေး။ မရပါ။
Q: ဘယ်အချိန်မှာငါ "ကိုသုံးပါလိမ့်မယ်ငါသည်ဤမဝယ်နိုင်!"? ထိုသို့ကဘာလဲ?
A: "ငါသည်ဤမဝယ်နိုင်!"သင်ဝယ်ယူရန်ကြိုးစားနေတစ်အစားအစာကို item အဆိုပါမှတ်ပုံတင်မှာငြင်းပယ်သောအခါသင်သည် WIC ပြောပြပေးနိုင်ပါတယ်။ သင်အသုံးပြုလိုက်တဲ့အခါ, "ငါသည်ဤမဝယ်နိုင်!WICShopper အက်ပလီကေးရှင်းတွင် WIC ပြည်နယ်အေဂျင်စီကအသိပေးအကြောင်းကြားလိမ့်မည်။ WIC ပြည်နယ်အေဂျင်စီသည်တင်သွင်းထားသောပစ္စည်းများအားလုံးကိုပြန်လည်သုံးသပ်ပြီးသင့်အားခွင့်ပြုထားသောအစားအစာများရရှိစေရန်စတိုးဆိုင်များနှင့်အလုပ်လုပ်လိမ့်မည်။
Tennessee ပြည်နယ် WIC ဈေးဝယ်လမ်းညွှန်
Tennessee ပြည်နယ် WIC Guía de Compras
WIC မှ ၀ င်ရောက်နိုင်ခြင်း
Tennessee ဌာနကျန်းမာရေး ၀ ဘ်ဆိုဒ်အတွင်းရှိသတင်းအချက်အလက်အားလုံးသည်ပညာရေးဆိုင်ရာရည်ရွယ်ချက်များအတွက်သာရည်ရွယ်ပြီးရောဂါသို့မဟုတ်ကုသမှုအတွက်အသုံးပြုရန်မဟုတ်ပါ။ သတင်းအချက်အလက် WIC အာဟာရနှင့်ဆက်စပ်သောကိစ္စရပ်များပိုမိုနားလည်စေရန်ပေးထားပါသည်။ သုံးစွဲသူများသည်ဤ site တွင်တွေ့ခဲ့ဖူးသောအရာတစ်ခုခုကြောင့်ဆေးကုသမှုဆိုင်ရာအကြံဥာဏ်များကိုလျစ်လျူရှုခြင်းသို့မဟုတ်ရှာဖွေခြင်းကိုနှောင့်နှေးခြင်းမပြုရပါ။ အာဟာရပညာရှင်များ၊ ဆေးသမားများနှင့်အခြားကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုပညာရှင်များသည်အခြားနေရာများနှင့်တိုင်ပင်ဆွေးနွေးရန်နှင့်ဤ site ရှိသတင်းအချက်အလက်များကိုအတည်ပြုရန်တိုက်တွန်းပါသည်။ ထုတ်ကုန်၊ ၀ န်ဆောင်မှုသို့မဟုတ်သတင်းအချက်အလက်အရင်းအမြစ်များကိုဤ ၀ က်ဘ်ဆိုက်တွင်ပါ ၀ င်ရန် Tennessee of Health Department မှတိုက်ရိုက်ဖြစ်စေ၊ အဓိပ္ပာယ်သက်ရောက်သည်ဖြစ်စေထောက်ခံချက်အဖြစ်မသတ်မှတ်သင့်ပါ။ ထို့အပြင်ဌာနသည် ၄ ​​င်း၏ ၀ ဘ်ဆိုဒ်နှင့်ချိတ်ဆက်နိုင်သည့်အခြားဆိုဒ်များတွင်ပါ ၀ င်သည့်သတင်းအချက်အလက်များကိုဌာနအားတာဝန်မယူနိုင်ပါ။
ဖက်ဒရယ်နိုင်ငံသားအခွင့်အရေးဥပဒေနှင့်စိုက်ပျိုးရေးအမေရိကန်ဌာန (USDA) နိုင်ငံသားအခွင့်အရေးစည်းမျဉ်းများနှင့်မူဝါဒများ, ကြံ့ဖွံ့, ယင်း၏အေဂျင်စီများ, ရုံးများနှင့်ဝန်ထမ်းများနှင့်ပါဝင်သို့မဟုတ်ကြံ့ဖွံ့အစီအစဉ်များကိုစီမံခန့်ခွဲအဖွဲ့အစည်းများပြိုင်ပွဲအပေါ်အခြေခံပြီးခွဲခြားဆက်ဆံမှုကနေပိတ်ပင်တားမြစ်သည်, အရောင်, အညီ ကြိုတင်နိုင်ငံသားအခွင့်အရေးလှုပ်ရှားမှုများအတွက်မူရင်းနိုင်ငံသား, လိင်, မသန်စွမ်း, အသက်, ဒါမှမဟုတ်လက်တုံ့ပြန်ခြင်းသို့မဟုတ်လက်တုံ့ပြန်မှုကြံ့ဖွံ့များကကောက်ယူသို့မဟုတ်ငွေကြေးထောက်ပံ့မဆိုပရိုဂရမ်တစ်ခုသို့မဟုတ်လှုပ်ရှားမှု၌တည်၏။
အစီအစဉ်အချက်အလက်များများအတွက်ဆက်သွယ်ရေး၏အခြားရွေးချယ်စရာနည်းလမ်းမလိုအပ်သူကိုမသန်စွမ်း (စသည်တို့ကိုဥပမာမျက်မမြင်စာ, ကြီးမားတဲ့ပုံနှိပ်, audiotape အမေရိကန်သင်္ကေတပြဘာသာစကားကို) နှင့်အတူပုဂ္ဂိုလ်များ, သူတို့ကအကျိုးခံစားခွင့်များအတွက်လျှောက်ထားရှိရာအေဂျင်စီ (ပြည်နယ်သို့မဟုတ်ဒေသဆိုင်ရာ) ကိုဆက်သွယ်သင့်ပါတယ်။ သည်နား၏ခက်ခဲဆွံ့အနားမကြားသို့မဟုတ်မိန့်ခွန်းမသန်စွမ်းသူတစ်ဦးချင်းစီ (800) 877-8339 မှာ Federal Relay Service ကတဆင့်ကြံ့ဖွံ့ဆက်သွယ်နိုင်ပါသည်လိမ့်မည်။ ထို့အပြင်အစီအစဉ်အချက်အလက်များအင်္ဂလိပ်ထက်အခြားဘာသာစကားများဖြင့်မရရှိနိုင်ဖန်ဆင်းနိုင်ပါသည်။
ခွဲခြားဆက်ဆံမှု program တစ်ခုတိုင်ကြားရန်, ဖြည့်စွက် ကြံ့ဖွံ့အစီအစဉ်ခွဲခြားဆက်ဆံမှုတိုင်ကြားချက် Form ကို, (AD-3027) အွန်လိုင်းတွင်တွေ့ရှိနိုင်သည်။ http://www.ascr.usda.gov/complaint_filing_cust.htmlနှင့်မည်သည့် USDA ရုံးတွင်မဆို USDA သို့လိပ်မူသည့်စာတစ်စောင်ကိုရေးပါ။ တိုင်ကြားချက်ပုံစံမိတ္တူကိုတောင်းခံရန် (866) 632-9992 ကိုခေါ်ပါ။ သင်၏ဖြည့်စွက်ထားသောပုံစံသို့မဟုတ်စာကို USDA သို့တင်ပြပါ။
ဖက်စ်: (202) 690-7442; ဒါမှမဟုတ်
အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု Los ဒေမ programas က de asistencia nutricional del FNS, Las Agencia estatales y ကဒေသခံက y sus beneficiarios secundarios, deben publicar el siguiente Aviso က de အဘယ်သူမျှမDiscriminación:
အစီအစဉ်များ (ဥပမာအားဖြင့်, စနစ်ဘရိုင်ယယ်, letras Grandes, အသံ cintas အသံ, lenguaje de señasအမေရိကန်, စသည်တို့), ဆက်သွယ်ရေး con la agencia (estatal o ဒေသဆိုင်ရာ) အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူများ။ ပြည်ထောင်စုကြံ့ခိုင်ရေးနှင့်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဗဟိုပြု relay ဝန်ဆောင်မှု [Servicio Federal de Retransmisión] al (800) 877-8339 အစီအစဉ်များကိုသတင်းပေးပို့ခြင်း
မသန်စွမ်း presentar una denuncia က de discriminación, ပြည့်စုံ el Formulario က de Denuncia က de Discriminación del Programa del ကြံ့ဖွံ့, (AD-3027) Que está disponible en línea en: http://www.ocio.usda.gov/sites/default/files/docs/2012/Spanish_Form_508_Compliant_6_8_12_0.pdf။ က y en cualquier oficina del ကြံ့ဖွံ့, o Bien escriba una carta dirigida အယ်လ်ကြံ့ဖွံ့ကeincluya en la carta Toda la información solicitada en el formulario ။ မသန်စွမ်း solicitar una copia del formulario က de denuncia, အယ်လ် (866) 632-9992 llame ။ Haga llegar su formulario lleno ဏ carta အယ်လ်ကြံ့ဖွံ့ por:
ဖက်စ်: (202) 690-7442;
ကိုရီးယားလျှပ်စစ်: program.intake@usda.gov ။
Esta institución es un proveedor Que ofrece igualdad က de oportunidades ။